Ama-tattoos webhayisikili amancane, aginqika nawe | Ukuzidweba umzimba
Ama-tattoos webhayisikili amancane, agingqika nawe
Nathi Cerezo | | Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni
Ama-tattoos webhayisikili amancane anikeza lokho akuthembisayo: indlela yokuthutha ehlanzekile neyomuntu siqu kakhulu, kusukela kumamodeli anamabhasikidi nezimbali kuya emabhayisikili asezintabeni, nokuthi ku-tattoo encane neqondayo kubonakala kumangalisa.
Kulesi sihloko sizokhuluma kafushane mayelana okungenzeka incazelo yalawa ma-tattoos, ngaphezu kokukwethula imibono eminingi ehlukene ukuze uphefumulelwe futhi uthole umklamo owuthandayo.. Futhi uma ufuna okwengeziwe, sincoma lesi esinye isihloko mayelana ibhayisikili tattoos ukuthatha ukuphila rolling.
1 Ibhayisikili tattoo izincazelo
2 Imibono ye-tattoo yebhayisikili encane
2.1 Ibhayisikili elilula emlenzeni
2.2 Hamba ngebhayisikili esihlakaleni
2.3 Igama elithi 'ibhayisikili'
2.4 Hamba ngebhayisikili nezwe
2.5 Hamba ngebhayisikili ngezinhliziyo
2.6 Iketango lamabhayisikili
2.7 Ibhayisikili ethangeni
3 Ungayisebenzisa kanjani ngokunenzuzo le tattoo
Ibhayisikili tattoo izincazelo
Ama-tattoos webhayisikili banezincazelo eziningi ezahlukeneYikuphi okukuchaza kakhulu kuzoxhomeka kuwe kanye nezakhi ezihambisana ne-tattoo.
Okokuqala, amabhayisikili, njengoba kubonakala, khombisa uthando oluzwayo ngalolu hlelo lwezokuthutha. Kungakhathaliseki ukuthi kuyindlela yakho eyinhloko yokuhamba, ngoba kuyindlela yakho yokuphila noma umsebenzi wakho wokuzilibazisa noma ngoba ucabanga ukuthi ichaza ukulwa kwakho nokushintsha kwesimo sezulu kahle kakhulu, ibhayisikili liwuphawu lothando lwakho lwamasondo amabili.
Futhi, amabhayisikili anombono onamandla kakhulu wenkululeko. Mhlawumbe ngenxa yokuthi babeyinkululeko ngosonhlamvukazi lapho sisebancane futhi sifunda ukugibela ibhayisikili, le moto iyisampula yezikhathi zethu zokuqala zokuzimela, isinyathelo esihle sokuvuthwa esingamelelwa kahle kakhulu ku-tattoo.
Okokugcina, amabhayisikili nawo angamela uthando lwakho nokomela kwakho uhambo. Ikakhulukazi uma uwahlanganisa ne-landscape (Ngisho noma liyi-minimalist, indawo eyenziwe lula futhi encane ingaba yinhle), ibhayisikili liyindlela yokuhlola umhlaba ngenkathi uzihlanganisa ngokuphelele kuwo.
Imibono ye-tattoo yebhayisikili encane
Kunemibono eminingi lapho ungakhuthazwa khona ngama-tattoos webhayisikili amancane ezidlulisa zonke izincazelo ezimangalisayo esisanda kukhuluma ngazo. Ngokwesibonelo:
Ibhayisikili elilula emlenzeni
I-tattoo enhle epholile enamabhayisikili amancane yiwona obeka le ndlela yokuthutha emlenzeni, indawo ehlobene ikakhulukazi nomkhuba walo mdlalo, ngoba kungenxa yamandla emilenze esiphusha ngayo lapho sihamba ngebhayisikili. Kuya ngendawo yomlenze lapho siyibeka khona, ibhayisikili lingaba nemininingwane eminingi noma encane.
Hamba ngebhayisikili esihlakaleni
Enye indawo epholile kakhulu yokubeka ibhayisikili isihlakala. Ngokungangabazeki, ekubeni indawo emincane kangaka futhi eseduze nethambo, izocela umklamo olula ngangokunokwenzeka, futhi Kuyafaneleka ngisho nokukhipha umbala ukugqamisa ibhayisikili ngaphandle kokulahlekelwa amandla okuklama.
Igama elithi 'ibhayisikili'
Imidwebo yebhayisikili ayilula neze kunaleli gama elidwetshiwe. Ngaphandle kokungabaza, indlela yoqobo yokubonisa uthando lwakho ngale ndlela yezokuthutha. Ngaphezu kwalokho, iguquguquka kakhulu kunalokho kubonakala, ngoba ikuvumela ukuthi ukhethe usayizi (okukhulu kuhle njengokuncane) kanye nefonti yohlamvu, okuzoncika ekutheni yini ofuna ukuyidlulisa.
Hamba ngebhayisikili nezwe
Le tattoo ilungele labo abaye bahamba noma bahamba ezweni noma indawo futhi bafuna ukuyibulala esikhumbeni sabo. Ngaphezu kwalokho, ihambisana nomklamo olula kakhulu, lapho kukhona kuphela uhlaka lwebhayisikili kanye nezwe noma isifunda okukhulunywa ngaso. Uma uzizwa uthanda, ungawuhlanganisa nombala omncane.
Hamba ngebhayisikili ngezinhliziyo
Ayikho indlela enkulu yokubonisa uthando lwakho ngalesi simiso sezokuthutha kunokusihlanganisa nezinhliziyo ezinhle. Ngalo mqondo unamathuba amaningi, isibonelo, ukuzungeza ibhayisikili ngenhliziyo, ukubeka izinhliziyo ezincane ezibomvu nxazonke noma ngisho nokwenza amasondo yizinhliziyo, njengasesithombeni.
Ngaphezu kwamasondo kanye ne-chassis, enye yezinto ezibonakalayo kakhulu zamabhayisikili yiketango. Izitha ezinamabhulukwe amade (ngesinye isikhathi ngawahlephula amanye abanjwa iketango, ngingabali ukuthi lingcole nini), Iketanga alibukeki nje lihle njenge-tattoo elula, kodwa liyi-original eyengeziwe futhi ukuma kwayo kunezinto ezihlukahlukene kakhulu.
Futhi siphetha ngendawo lapho uzobeka khona ama-tattoos ebhayisikili, nakuba uzodinga umklamo omkhulu futhi ongelula kangako. Ngenxa yokuma kwawo okuvundlile, amabhayisikili alingana ngokumangalisayo kule ngxenye yomzimba, nakuba, njengoba sishilo, ubukhulu kufanele bube bukhudlwana. Ngakho-ke, uma ukhetha ukudweba ibhayisikili ethangeni lakho, umklamo onemininingwane eminingi futhi ongokoqobo ungaba omangalisayo, futhi, futhi, inketho emnyama nemhlophe izolingana kangcono kunombala, okufanele ishiywe kuphela ngemininingwane ecacile kakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani ngokunenzuzo le tattoo
Into enhle ngama-tattoos webhayisikili amancane ukuthi, ekubeni mancane, alingana cishe noma yikuphi emzimbeni. Ngakho-ke, nakuba zinganconywa kulezo zindawo ezinesikhumba esiningi lapho "zingalahleka khona", ziyimiklamo ebukeka kahle kwezinye izingxenye zomzimba ezizibeka ngokwemvelo, njengesihlakala, izingalo, iqakala, intamo. , ngemuva kwendlebe, izinyawo, izandla ...
Iqhinga lokuyigcina ilula futhi ingagxili kakhulu ukugcina imigqa nokuklama kuhlanzekile. Ngokufanayo, ukuchazwa kufanele kucace futhi kube kuhle, ngaphezu kweqiniso lokuthi umbala awulayishwanga kakhulu, kodwa unombala omnyama nomhlophe noma okungenani unombhalo wombala othuthukisa ucezu.
Ama-tattoos wamabhayisikili amancane asekela imiklamo eminingi ehlukene, yonke ngomusa wayo futhi ebukeka kahle. Sitshele, ingabe unawo ama-tattoos asekelwe kule ndlela yokuthutha? Uyithathaphi? Kusho ukuthini kuwe?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukudweba imifanekiso emzimbeni » Izinhlobo zamathambo » Izinto nezinto ezidwetshwe emzimbeni » Ama-tattoos webhayisikili amancane, agingqika nawe
Ama-tattoos ebhendi yomshado yothando neyokuqala
Ama-tattoos amaGreki, impucuko yonke esikhumbeni sakho